Global Voices teny Malagasy » Mpanao Lalàna Ao Taiwan Mety Haongana Noho Ny Fanohanany Ny Fanambadian’ny Samy Lahy sy Vavy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Janoary 2018 16:20 GMT 1	 · Mpanoratra I-fan Lin Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Taiwan (ROC), Fahalalahàna miteny, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT)
Mety haongana ilay mpanao lalàna, Kuo-Chang Huang, noho ny fanohanany ny fanambadian'ny samy lahy na samy vavy. (Sary: Facebook-n'i Kuo-Chang Huang).
Taiwan no lasa firenena Aziatika voalohany  nanaiky ny fanambadian'ny mitovy taovam-pananahana tamin'ny volana May 2017 rehefa nanapa-kevitra  ny Filankevitry ny Fitsarana Lehibe fa tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana ny lalàna mandràra ny fanambadiana eo amin'ny mpivady mitovy taovam-pananahana. Nanambara ny fitsarana fa manitsakitsaka ny zo fahalalahan'ny fanambadiana sy ny fitovian-jo eo amin'ny olom-pirenena ny lalàna ka nomena roa taona ny mpanao lalàna mba hamorona lalàna vaovao.
Kanefa mbola mideza ny lalan'ny fanavaozana lalàna. Mitady fanentanana fitsapa-kevi-bahoaka ireo vondrona mpandala ny nentin-drazana mba hanongana ireo mpanao lalàna izay miezaka mampihatra ny didim-pitsarana. Ny Stable Force Alliance , izay ahitana ny Ligin'ny Finoana sy ny Fanentanana, ny antoko politika Kristiana elatra havanana, sy ireo mpikambana mavitrika sasany ao amin'ny Fiangonana Presbyteriana any Taiwan no nanetsiketsika ireo fanentanana fifidianana hanongana ireo mpanao lalàna ireo.
Anisan'ny kendren'izy ireo, ankoatra ny hafa, ilay mpanao lalàna Kuo-Chang Huang , filohan'ny Antoko Fahefana Vaovao, mpanao lalàna tao amin'ny distrikan'i New Taipei City faha-12 hatramin'ny taona 2016. Manam-pahaizana miavaka momba ny lalàna sy iray amin'ireo mpitarika ny Hetsika Tanamasoandro (Sunflower Movement) , izay nanampy namarana ny fitondran'ny Kuomingtang  tao Taiwan i Huang. Nandritra ny roa taona  niasany tao amin'ny Antenimiera Yuan, nanadihady tranga goavana momba ny kolikoly izy. Asa izay nahatezitra ireo hery politika hafa mpandala ny nentin-drazana sy ireo mpanao politika mpanao kolikoly, izay manantena hanàla azy.
Raha haongana ny mpanao lalàna fanta-daza toa an'i Huang noho ny fanohanany ny fanambadian'ny samy lahy na samy vavy, dia mety hampitsahatra ny fandroson'ny volavolan-dalàna momba ny fanambadian'ny samy lahy sy samy vavy ny fiantraikany.
Indrisy fa ho an'i Huang sy ny volavolan-dalàna momba ny fanambadian'ny samy lahy sy samy vavy, manamora ny fifidianana fanonganana manampahefana ny fitsipika amin'izao fotoana izao. Nanazava i Nathan Batto, mpikaroka ara-politika fa talohan'ny nanitsiana ny lalàna momba ny fifidianana fanonganana manampahefana tamin'ny taona 2016, nitaky taham-pandraisana anjara 50% amin'ireo mpifidy afaka mifidy izy ireo, ary ny vato ‘eny’ dia tsy maintsy mihoatra ny 25%. Nanaisotra ny fandraisana anjara ambany indrindra ny fanitsiana ny lalàna ary mitaky vato maro an'isa tsotra amin'ny “eny” mba handany ny fanonganana.
Hatao ny 16 Desambra ny fifidianana fanonganana an'i Huang. Tohanan'ny vondrona iray miantso ny tenany ho “Fiangonana Presbyteriana Atsimo sy Avaratra” sy ny Kaohsiung-Pingtung Alliance, izay namoaka fanambarana ampahibemaso  tamin'ny 8 Desambra ankehitriny ny antokon'ny Finoana sy ny Fanantenana. Nanome vahana tanteraka ireo antoko mpanohitra gay ity fanambarana ity satria ny fiangonana Presbyteriana no fiangonana protestanta lehibe indrindra any Taiwan. Niteraka adihevitra goavana teo anivon'ny mpikambana ao amin'ny Fiangonana Presbyteriana ihany koa ity fanambarana ity, satria, amin'ny ampahany, tsy nampiasaina ny anarana hoe ‘Fiangonana Presbyteriana Atsimo sy Avaratra’ hatramin'ny nanakambanana azy ireo tamin'ny taona 1950.
Mu-Min Shih, mpikambana ao amin'ny Fiangonana Presbyteriana, nanazava tao amin'ny pejy Facebook-ny  fa ny Fihaonamben'ny Fiangonana Presbyteriana ao Taiwan dia tsy manohana ity fanambarana ity.
Tsy nanapa-kevitra hanohana ny fifidianana hanongana an'i Huang ny Fihaonamben'ny Fiangonana Presbyteriana. Tsy misy ny antontan-taratsy ofisialy toy izany. Amin'ny anaran'izy ireo manokana izay olona nanao sonia izany fanambarana izany miaraka amin'ny toeran'izy ireo ao amin'ny Fiangonana Presbyteriana.
Nitsikera ireo fahadisoana ao amin'ny rafitra demokratika sy ny fitantanana birao ao amin'ny Fiangonana Presbyteriana ny Fikambanan'ny Tanora ao amin'ny Fiangonana Presbyteriana.
Mametraka fanontaniana izay mbola hangatahantsika hatramin'ny nananganana ny Fikambanantsika izany: manana olana ny solontenan'ny fiangonana presbyteriana.
Nahoana ireo Presbyteriana ireo no afaka manambara ity fanambaràna ity tsy misy firesahana amin'ny mpikambana ao aminy? Nahoana izy ireo no mamoaka ny fanambarany manokana tsy misy fakan-kevitra amin'ny Fivoriambe?
Raha voaongana i Huang, dia hisy fiantraikany amin'ny lalàna momba ny fanambadian'ny samy lahy sy samy vavy ao Taiwan izany. Ny Ligin'ny Hery Tsy Mihontsona dia mety hanongana ireo mpanao lalàna hafa izay manohana ny fanambadian'ny mitovy taovam-pananahana ary mikasa hampiato ny volavolan-dalàna momba ny fanambadian'ny samy lahy sy samy vavy. Raha tsy mahomby ity fifidianana fanonganana ity, dia mety ho foana ny Ligin'ny Hery Tsy Mihontsona, ary hotontosaina araka ny baikon'ny fitsarana ambony ny volavolan-dalàna momba ny fanambadian'ny samy lahy sy samy vavy.
Na inona na inona vokatra amin'ity fifidianana fanonganana ity, hiatrika fanerena fanavaozana ny Fiangonana Presbyteriana. Na dia tsy namoaka fanambarana hanohana ny fanonganana an'i Huang aza ny Fivoriamben'ny Fiangonana Presbyteriana, mahatsapa ny sasany fa fihetsika miharihary maneho fankasitrahana ny fahanginany. Ohatra, Josephine Hsu, mpikambana ao amin'ny Fiangonana Presbyteriana, dia niantso ny fanavaozana ny Fiangonana  tao amin'ny pejiny Facebook:
Manohy mangina tanteraka ny Fivoriambe amin'izao fotoana izao. Tsy niteny mihitsy izy na dia hoe ‘tsy manana fifanarahana izahay, ary manantena fa afaka manombana ireo mpanao lalàna amin'ny alàlan'ny zava-bitan'izy ireo ny olom-pirenena, ary tokony hikatsaka vaovao marina momba ny fitiavan’ Andriamanitra isika. ‘[…] Tao Taïwan nandritra ny 150 taona ny Fiangonana Presbyteriana, ary tsy azo antoka ny tsy fanaovany kolikoly. […] Tolona ho an'ny fahefana avokoa ny fanavaozana rehetra. Raha tsy mahomby ny revolisiona, hiala amin'ny Fiangonana ny tanora.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/01/08/111954/
 firenena Aziatika voalohany: https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2017/05/24/529841027/taiwans-high-court-rules-same-sex-marriage-is-legal-in-a-first-for-asia
 Stable Force Alliance: https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%AE%9A%E5%8A%9B%E9%87%8F
 Kuo-Chang Huang: https://en.wikipedia.org/wiki/Huang_Kuo-chang
 Hetsika Tanamasoandro (Sunflower Movement): https://globalvoices.org/specialcoverage/2014-special-coverage/taiwans-congressoccupied-protests/
 roa taona: http://www.ccw.org.tw/node/24736
 Nanazava : https://frozengarlic.wordpress.com/2017/11/18/huang-kuo-changs-recall-vote/
 fanambarana ampahibemaso: http://krtnews.tw/chinese-church/local/article/17378.html
 tsy nampiasaina : https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%9F%BA%E7%9D%A3%E9%95%B7%E8%80%81%E6%95%99%E6%9C%83
 Nitsikera : https://www.facebook.com/2014tkcfront/
 niantso ny fanavaozana ny Fiangonana: https://www.facebook.com/nocturnes.jo/posts/10212649077796209?hc_location=ufi